Mpampiely boky manan-talenta , hijoro ho vavolombelona
Dia ny nanompoako ny Tompo tamin’ ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakam-panahy izay nanjo ahy tamin’ ny fanotrehan’ ny Jiosy, ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason’ ny olona ary tao amin’ ny isan-trano. Asa.20:19,20
Ny fahazavana nomen' Andriamanitra ahy dia manambara fa misy andraikitra maro kokoa mipetraka eo amin'ny mpampiely boky.
Tokony handeha hanao ny asany amim-pahavonona hanazava ny Tenin'Andriamnaitra izy ireo, ka tsy hisy tokony hamatotra ny tanany na izay teneniny, na izay ataony. Eny, asaina mitety toerana samihafa izy, ka raha mametraka ny fitokisany amin'ny Tompo ireo, dia hihodidina azy ny anjelin`Andriamanitra, ka hanolotra azy ny teny hoteneniny, izay hitondra fahazavana sy fanantenana ary herimpo ho an'ny fanahy maro.
Raha tsy noho ny asan'ny mpampiely boky dia maro, ireo, olona izay tsy handre na oviana na oviana ny fahamarinana.
Amin'ireo talenta rehetra izay nomen'Andriamanitra ny olombelona, dia tsy misy mihaja indrindra na feno fitahiana lehibe indrindra noho ny talentan'ny fahaizana mandaha-teny, raha toa ka nohamasinin'ny Fanahy Masina izany. Amin'ny alalan'ny lela no handresentsika lahatra sy hampiekentsika fahotana. Amin'ny alalany no hanolorantsika vavaka sy fiderana an'Andriamanitra, ary amin'ny alalany no hampitantsika ireo hevitra mikasika ny fitavan'llay Mpanavotra.
Afaka ny hampiely ny voan'ny fahamarinana amin'ny alalan'izany asa izany ny mpampiely boky, ka hahatonga ny fahazavana avy amin'ny tenin' Andriamanitra hamirapiratra ao antsain'ny maro.
Manantena amin'ny foko rehetra aho, fa tsy hisy saina hihevitra fa manamaivana ny minisiteran'ny filazantsara ny fampielezam-boky.
Henoy ny fijoroana ho vavolombelona nataon'i Paoly apoôstôly: "Ary nony tonga teo aminy ireo, dia hoy izy taminy: "Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Azia izay toetry ny fitondran-tenako, taminareo tamin'izany andro rehetra izany, dia ny nanompoako ny Tompo tamin'ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso aryj ny fakam-panahy izay nanjo ahy tamin'ny fanotrehan'ny Jiosy, ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason'ny olona ary tao amin'ny isantrano; ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompontsika." - Asa. 20:18-21.
I Paoly, ilay mahay mandaha-teny, izay nisehoanAndliamanitra tamin'ny fomba manokana, dia nandeha nitety tokantrano, tamin'ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakampanahy.